बिहानै मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि तपाइको आजको राशिफल हेर्नुहोस – Khabar Silo
बिहानै मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि तपाइको आजको राशिफल हेर्नुहोस
Posted on October 16, 2019 Author admin Comment(0)
आज २०७६ असोज २९ गते बुधबारको राशिफल । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ। धेरै सक्रियता स्वास्थ्यका लागि बाधक बन्न सक्छ ।
अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। लगनशीलताले संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। कमजोर नतिजा सच्याउन केही काम दोहोर्याउनुपरेे पनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। आलोचकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको साथ प्राप्त हुनाले काममा उत्साह जाग्नेछ। बाेलीकाे भरमा काम सम्पादन हुनेछ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने मनग्य धन आर्जन हुनेछ। सानाे प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। आगन्तुकहरूकाेे उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। पछिका लागि कर्मफल सञ्चय गर्ने समय छ। मेहनतले अवसर दिलाउनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ।
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन ,जेष्ठ १८ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Posted on May 31, 2021 May 31, 2021 Author khabar silo
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ १८ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ जुन १ तारीख जेठ कृष्णपक्ष षष्ठी तिथी धनिष्ठा नक्षत्र ऐन्द्र योग भद्रा करण चन्द्रमां मकर राशिमा प्रातः ०९ः०७ बजे पश्चात कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा उत्पात योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु वन उपभोक्ता दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, […]
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन,जेष्ठ २६ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Posted on June 8, 2021 Author khabar silo
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २६ गते बुधबार इश्वी सन २०२१ जुन ९ तारीख जेठ कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथी कृत्तिका नक्षत्र पश्चात रोहिणी नक्षत्र सुर्कमा योग पश्चात धृती योग चतुष्पद करण चन्द्रमां बृष राशिमा आनन्दादि योगमा सिद्धि योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, […]
Posted on June 28, 2020 Author khabar silo
मेषः– मनमा शान्ति मिल्ने छैन । देख्दा साना तर गर्दा जटिल बन्दै जानेछन् । लगानीका क्षेत्रबाट हात झिक्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ । पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गाह्रो हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अझै सुधार आउने देखिन्न । आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । वृषः– समयको […]
पूर्व युवराज पारसद्वारा जोगी बन्ने घोषणा, पूर्वीय दर्शन अध्ययन गर्दै गरेको खुलासा
घरमा सधैँ लक्ष्मीको बास चाहानुहुन्छ ? राख्नुस् यस्ता मूर्ति र प्रतिमा